100% Xal sax u ah tabashada Awdal - kaalinta muuse biixi iyo jawaabtii cabdi meecaad allaale.Dr.khadar-Libaaxley. | Awdalmedia.com
100% Xal sax u ah tabashada Awdal - kaalinta muuse biixi iyo jawaabtii cabdi meecaad allaale.Dr.khadar-Libaaxley.
Bidaar muuqataa lagu qarshaa xiiritaan badan
Wax loobogo ka soo biiriyo beesad kaan qaban
Mid ba hadaanu baashka kuugu ool bogaga taariikhda
Oo aanad kula baayactamin waxa badka u yaal
Waa bar kuma taal, midba hadhow wuxu ku baanaa
Wey u banaantahay.!!!.
Waa tuducyo ka mida maansadii badhaysi ee abwaanka cabqariga ah cabdiraxmaan cumar cashuur.
Tabashada reer awdal hab cilmiyeysan aynu u gofeynee ina keen mudane akhriste inaga oo ku furaneyna weydiimahan:
tabashada yaa abuurey? Wax haba dhinaadeene waxse malaga jawaabay? Xisbigeese garwaaqsaday iskuna dayey in uu ka jawaabo?
Reer awdal ma qof magiciibaa mise waa reero? Sideense wax ugu qaybiyaa waxa ay haybinayaan?
Tabashada reer awdal waxa ay abuurantay 17 sannadood oo mujaahid c/raxmaan aw cali iyo mudane daahir rayaale kaahin dhanka reer awdal ay tallada u hogaaminayeen, nabarkii iyo qoontii ay abuureen ee tabashada baahsan dayaca iyo baylahda wax qabad la’aanta geeswalba buux dhaafisay ee madaxdaa hore abuureen :
waxa garawsaday xisbiga kulmiye, waxa ka jawaabay xisbiga kulmiye , wixii dhimana isaga ayuun baa dhamaystiri illeyn dad iyo dhul aasmay maalin kaliya lama wada soo faqi karo, wakhti qaadaneysaa in ay wax saxmaan.
xukuumada kulmiye reer awdal waxa ay u garatay xillalkii taariikhda dhankooda ugu badnaa iyo waxqabadkii ugu badna abid ee u qabsooma oo aad markhaati u tihiin oo aad ka akhrisankartaan ( www.xeegonews iyo www.awdalmedia.com oo ay baaqi qormooyinkaasi ku yihiin illaa hada aniga oo tixgali u haya website yada kale ee dalka, waxqabadkaasi xisbi ku jecel iyo alluun baa laga hellaa.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani mudane c/raxman ciro markii laga tala galiyey ee baarlamaanka lagu soo mariyey, ma garwaaqsanin isagu, tallo bixintii dawladu ka rabtayna uu ka gaabsaday, tirada wakiilada reer awdal si loogu kordhiyo ka arimi markii la yidhi waa kii ku jawaabay wey haystaan waxoodii, waxa daliil u ahaa maalintii xildhibaanada reer awdal dhamaantood ka soo dareereen ee uu yidhi inoo sii wada shirka waxba inaga dhimimaayaane inagaa isku filane!! taasi oo aan meesha qabaneyn; waliba xildhibaanada reer awdal waa kuwii horey uga bad-baadiyey isaga mooshinkii sanka caanaha lagaga lisayey ee xirsi ku soo qaaday; mudane ciro waa ninkii madaxweyne daahir rayaale ka hadhsan kari waayey ee waliba mudaharaadyada iyo mooshinada xilkaqaadista ahaa marwalba heeganka ugu ahaa ee marwalba golaha guurtidu ka ridi jirtay!! ma masuul noocaas ah ayaa reer awdal tabashadooda wax ka tari kara??! ninkaan ogeyn siduu isugu diray mudane axmed muunin seed iyo amb maxamed cali ?? ( ubadkiyo kas gaabkaa waxkale loo akhrinayaaye ujeedada ha weydiin cidaan meel fog wax ka arkeyn ).
musharax muuse biixi waa nin reer awdal ah, waxa ay gudaan , waxa ay gooyaan iyo waxa ay gayaan ba uu yaqaan, xaq weyn oo musharax kale reer awdal ku lahayn ayuu isagu ku leeyahay oo ah xaqa iyo xuquuqda ood wadaagnimo, oo dhaqankeenii iyo diintuba fareyso xaqa darisnimo ama ood wadaagnimo; hal adeygiisa waa ninkii yidhi maalintii axmed yaasiin la la baadigoobaayey xilka uu hada hayo ee gudoomiye xigeenka baarlamaanka ( intuu xildhibaanadii oo dhan isugu yeedhay guriga saylici ee hargaisa waar reer kulmiyow ninka raba in uu ii codeeyo, ha u codeeyo axmed yaasiin, ninka u codeyn waayaa waxba yaanu aniga ii codeyn ); reer awdal waxa aan leeyahay ( wasakh yaanu idin marin nimay dhadhamo kaala weyntahay, garta ninka idiin xiiraya ee qudh gooyadiina wada iyo ka idiin qoynaya ee idin daajinaya ).
**Xalka tabashada reer awdal ee horey xisbiga kulmiye u qarwaaqsaday:
Quraanku waa tusaalayaal hadh iyo habeen walba inala hadlaya gacantaha inoo haadinaya dhagaha weeleeya se ayey garashadu fadhidaa, sababta qisaska xilligii nabi muuse dhacay quraanka loogu sheegayo ummadan nabi maxamed ( naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaatee) waa in aynu ku xal iyo xuluul qaadano oo sidan u taala: ( nabi muuse tolkii reer banuu israa’el markii ay ku yidhaah deen biyo aan cabno nasii , nabi muuse illaahay ayuu baryey oo uu yidhi illaahow tolkay biyo ayey iga rabaane meel biyo iiga muuqdaana ma arkayo ee igu astur tolkay biyana soo sii; rabi waakii ku yidhi dhagaxa buurtan ushaada ku dhufo!! waatii dhagaxii 12 illo biyood ka soo baxeen, waa kuwii sidii ku biyo cabey- AAYADA QURANKU WAA TII AHEYD: ( WA CALIMA KULA UNAASIN MASHRABAHUM….) waxa aynu ka fahmeynaa in dhibta tabashadeena xalkeed halkan kala soo baxno ;
reer awdal iyo magac guud baynu wax ku dooneynaa; reer banuu israa’eelna magac guud bay ku dalbadeen in ay helaan biyo ay cabbaan!!.
illaahay 12 toban ilo biyood ayuu dhagaxa uga soo saaray sababtoo ah 12 qabiil ayey ahaayeen, qabiil waliba oo ka mid ah 12 kaa reer walaalaha ah waxa uu mid waliba ka durduurtay il-biyood u gaar ah si aaney isugu qabsan, sida aynu reer banii israa’elba arkayno qabiilna qabiil wax looguma darin.
reer awdal waa qabiilo badan sidee hadaba reer awdal waxa ay doonayaan loo siinayaa?! waxa wax laga rabaa waa dawlada ; sax waxa ah qabiil kasta oo reer kasta leh oo magac leh , meel yaal oo reer awdal ah markuu xaaladiisa ,waxa ka maqan, waxa uu doonayo darso kadib dawlada weysada ha u biyeysto ha raadsado xaqa iyo xuquuqda ka maqan dhankasta oo ay tahayba!!.
dawladuna maxay ka rabtaa; in uu dawlada u hogaansanyahay, cod iyo cuudna ku darsaday waayo xisbi kasta iyo dawlad kasta waxa ay xilka aad doonayso kugu siinaysaa, tirada codka ,codka ,codka aad ku darsato xisbi inta uu leegyahay ayuu leegyahay xilka aad helayso inta badan, si lamida lacagta aad haysato inta ay leegtay ayuun baad meherada aad u qasdidana allaab kaga soo dukaansaneysaa, YAAN LA DHAYALSAN SIRTA KU DUUGAN TIRADA CODADKA AAD LEEDAHAY, IYO MARKA LAGU LEEYAHAY KAADHADHKA QAATA IYO HA LA CODEEYO; waxa ku xidhan xilka aad doonayso iyo deegaanka aad rabto in wax lagaaga qabto ; sida marka aad rabto in aad xildhibaan la soo baxdo waxa kaa xigaayi yahay kaliya inta cod ee aad leedahay ayuun baad midhaheeda guraneysaa.
reer awdal waxa aan leeyahay qofkasta iyo qabiil kasta si mug iyo miisan leh doorashada ha u ga qaybqaato, reer kastaana codkiisa tirsado oo ha dabasocdo dawlada iyo madaxda xisbiyadana ha la hishiiyaan oo ha la xisaabtamaan barito.
Waxa aan ku rajaweynahay in reer kastaaba iyagoo isku dhan xisbiga kulmiye hishiis la galo, codkiisana uu kulmiye siiyo baritana baadi doonaan waxa codkoodu u gooyey.
Macalin cabdi meecaad allaale waxaan si gaara u leeyahay iyadoo hadalka kor ku xusan oo dhami ku socdo adigiyo qayrkaa, dhanka kalana bulshada faa’ido u sida; waxaanse adiga ku leeyahay ( hadal nin kaa xigo iyo hawl nin kaa xigo midna laguma degdego) lixda goobood ee lughaya adeerkaa daahir rayaale wakhtigiisii ayey xas iyo xanibaad galeen!! maanta oo kulmiye dhayaayo qoontii adeerkaa dhigay ma’aha bawdo iska dhirbaax iyo ka kacaay in aad dhagaha bulshada la hortimaado, in aad khajisho bay aheyd cida wax loo tirinayo ayaad tahay, kadaa bulshada oohinta yaxaaska , haday tabasho abuurantay tahay iyo haday goobaha lughay ka xidhan tahayb; ma jecli niyada in aan kaa xumeeyo, waayo nin weyn baad tahay garo maqaam kaaga; dad oodwaag tol ah baynu nahay, kala garo wixii san iyo wixii xun ba, waano mooyee wax xumee ismalihi, wanaag baan kuu hayaa, waxsheegna waan isku leenahay.